Abyssal Plain: Ihe niile I Kwesịrị Knowmara | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe anyị na-ekwu maka oke osimiri ala na usoro izugbe nke oke osimiri, anyị na-ekwu maka ya Ndagwurugwu. Ndị mmadụ na-agbagọkarị okwu a Ihe eji eme ihe, ma o nwere otutu iche. Ala dị larịị abyssal bụ ihe anyị na-akpọ akụkụ nke kọntinent nke na-emikpu n'oké osimiri wee mepụta ihu igwe na-adị larịị. Ọ na-adịkarị omimi n'etiti mita 2.000 na 6.000 n'okpuru ala.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile, mkpa, flora na fauna nke larịị abyssal.
2 Ọnọdụ na ihe ndị dị na larịị abis
3 Ifuru na umu anumanu nke ala abis
Ọ bụ akụkụ nke mpaghara kọntinent nke dị mfe nghọta ebe ọ bụ na profaịlụ ya fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị. Enwere otutu ndi iche echiche banyere ihe banyere ala banyere mmiri nke gbara ya gburugburu. A na-enwekarị ndudu dị ka mkpọda kọntinent tupu ị rute na mbara ọzara. Ozugbo anyị gafere usoro mmụta a, anyị na-ahụkwa ọdịda ọhụụ. Ọdịda ndị a bụ ogbu mmiri na abyssal abis.
E nwere ndị ọkà mmụta sayensị ndị na-eme atụmatụ na mkpọda nile dị nro a nke oké osimiri ha nwere ike ịmepụta 40% nke ala oke osimiri. N'ihi ala ndị a dị larịị ma miri emi, mmadụ nwere ike ịchọta nnukwu nsị mmiri dị na mbara ụwa dum. Enwere ike ịsị njirimara ndị bụ isi na mpaghara ya dị larịị. Ha nwere obere ochicho mana o ghaghi inweta ya n'ihi otutu ogugu o na - amalite.
N'ime mbara ala abissal ahụ, a na-echekwa nsị dị iche iche nke usoro ihe okike na-akpata na mpụga kọntinent ahụ. Usoro ndị a kpatara ihe omumu banyere ala ihe ndị ọzọ dị na mpụga na-eme ka etinye nsị n'ime oke osimiri. Ihe ndi ozo na-agabiga ugbu a ma dozie omimi di iche iche, na-ekpuchi oghere. N'ihi nke a, a na-enwe mbara ala ahụ ha na-edebanye aha ruo mita 800 nke ihe eji edozi.
Ìhè anyanwụ adịghị erudakarị omimi ndị a ka ọnọdụ okpomọkụ dị oke ala. E nwere ebe ebe okpomọkụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe oyi. Site na ọnọdụ gburugburu ebe obibi ndị a, otu ụdị osisi na anụmanụ na-amalite. Ọ bụ ihie ụzọ iche na ndụ anaghị etolite na mpaghara a. Ihe nile dị ndụ na-emesị kwekọọ n'ọnọdụ ndị dị ugbu a.
Ọnọdụ na ihe ndị dị na larịị abis
Ọtụtụ n'ime mbara ala ndị a na-etinye uche na Atlantic Ocean. Onwere ebe di na Osimiri Indian ma ha no ebe pere mpe. Isi ihe di na mbara ala abis bu ihe ndia:
Ugwu ugwu mgbawa: ndị a bụ ihe ndị emegobere site na nchịkọta nke ihe. Ihe a sitere na ugwu mgbawa nke dị n’okpuru oke osimiri. Ihe omuma a na-achikota mgbe ihe ndi ozo di iche ma meputa obere oji ya na nkpuru ya nke oma na mgbidi.
Agwaetiti mgbawa ugwu: Ọ bụ ụdị enyemaka ọzọ dị na mbara ala a dị ma ha bụ ugwu ugwu mgbawa nke, n'ihi ọrụ ha na-arụ mgbe niile ma baa ụba, apụtawo n'elu. Mgbe ụfọdụ, ha na-arịgogo ọbụna narị narị mita karịa elu oke osimiri.
Igwe mmiri Hydrothermal: Ndị a bụ mpaghara nwere usoro dị iche na mmiri mmiri ọkụ na-esite. Agbanyeghị na gburugburu ebe ikuku ndị a dị ihe dị ka ogo 2, dị nso na oyi, mmiri nwere okpomọkụ dị n'agbata ogo 60 na 500 nwere ike isi na oghere ndị a pụta. A ghaghi iburu n'uche na n'ime ogbu mmiri ndị a ebe a hụrụ ala ala abyss, nrụgide dị ukwuu na mmiri nwere ike ịnọgide na-enwe mmiri mmiri n'agbanyeghị oke okpomọkụ ya. A maara nke a dị ka oke mmiri. Nchikota nke nsogbu na nnu nnu putara na mmiri nwere ike igbanwe ihe omuma ya ma dikwa ya na oke mmiri.
Ntucha oyiỌ bụ ezie na ọ bụghị nke anụ ahụ dị ka nke a, ọ bụ ihe ịtụnanya na-eme na mbara ala a. Ọ bụ ụdị lagoon ebe a na-etinye nnukwu hydrocarbons, hydrogen sulfide na methane. Ikuku ndị a na-ese n’elu mmiri. Could nwere ike ịsị na ọ dị ka ọ bụrụ na ọ bụ otu nkedo mmanụ na iko mmiri ọ bụ nnukwu ọnụ ọgụgụ. Ka oge na-aga, a na-eme ka ihe ndị a na-eme ka ọ ghara ịdị njọ ruo mgbe ha ga-apụ n'anya.
Guyot: ọ bụ usoro ọzọ nke mbido ya bụ ugwu mgbawa. Ọ bụ usoro okwute nwere okwute ma mgbe ụfọdụ ọ na - enwe ike ịpụta n’elu. Otú ọ dị, elu ya fọrọ nke nta ka ọ gbasaa, nke na-egosi na ọ ga-abụrịrị na ikuku nke ikuku emebi ya.
Ifuru na umu anumanu nke ala abis
Mgbe achọpụtara mbara ọwa ndị a, echere ha na ha sara mbara mbara ala na-adịghị ndụ. Dị ka ọzara ndị dị na kọntinent ndị ahụ, ọ bụkwa otú ahụ ka ọ dị maka mbara ọzara ndị a miri emi. Mgbe enwere nnukwu nsogbu mgbe ị gara ileta ebe a, echere ya na ndụ na ahịhịa adịghị. Agbanyeghị, ọtụtụ nyocha achọpụtala ụdị ụdị ihe dị iche iche nke ụmụ anụmanụ na-emekọrịta ihe n'ebe ndị a na akụkụ ndị gbara ya gburugburu.
Ebe ọ bụ na omimi ndị a ìhè anyanwụ adịghị erute na e nweghị ụdị osisi akụrụngwa ike photosynthesis. Ebe ndu nwere ike itinye uche di na hydrothermal vents nke bu ebe usoro mgbanwe oku na-eme. Chemosynthesis na-aputakwa ebe a, nke bu usoro nke umu ahihia na-eji ịbụ akụkụ nke ihe oriri nke mmiri mmiri.
Banyere ụmụ anụmanụ, ma ọ bụrụ na ọ bara ọgaranya ma dị iche iche. Enwere ihe dị ka ụdị 17000-20000, ọ bụ ezie na enwere ike ịnwe karịa. E nwere invertebrates dị ka crustaceans, ebubo, ejula, nje bacteria, protozoa na iyak na dịtụ ghostly na iju anya. Umu akwukwo a anaghi akwukwo nke oma n'ihi nsogbu nke iru ala oke osimiri.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ndị a bụ ebe ndị mmadụ na-amabeghị ma juputara na nzuzo na ọchịchọ ịmata ihe. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mbara ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ndagwurugwu Abyssal